ပင်လယ်မျက်နှာပြင် ပိုမိုမြင့်တက်လာနေခြင်းနှင့် စပ်လျင်း၍ (Sea Level Rising) - Myanmar Water Portal
News Burmese Articles Water Themes Disaster & Flooding
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အမြင့် (၁) မီတာ နဲ့ (၃) မီတာ မြင့်တက်ခဲ့လျှင် မြန်မာအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှ လေးနိုင်ငံမှာ ဆုံးရှုံးမဲ့ စိုက်ပျိုးမြေများကို ဟက်တာ နှင့် ပြထားပါတယ်။ Photo credit to original post.
ကမ႓ာ့ရာသီဥတု ပိုမိုပူပြင်းလာနေခြင်း နှင့်အတူ အအေးပိုင်းဒေသများမှ ရေခဲပြင်များ အရည်ပျော်နှုန်း မြန်ဆန်လာခါ ကမ႓ာကြီး၏ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာများ၏ ရေမျက်နှာပြင်များကို ပိုမိုမြင့်တက်လာစေခဲ့ပါသည်။ ပင်လယ်ပြင်နှင့် ထိစပ်မှုဧရိယာ များပြားပြီး မြေနိမ့်ဒေသများ သော တိုင်းပြည်နိုင်ငံများ၌ ကြီးမားသော ဘေးဒုက္ခများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
(၁) ထိစပ်နေသော ကမ်းခြေဧရိယာများ ပိုမို၍ ရေလွှမ်းခြင်း ခံလာရပါ သည်။
(၂) အရေးအကြီးဆုံးမှာ လက်ရှိသုံးစွဲနေသော ရေချိုရနေသည့် မြေပေါ် မြေအောက် ရေတွင်းရေကန်များအတွင်းသို့ ပင်လယ်ရေငံများ စိမ့်ဝင်ခါ ပျက်စီးစေခြင်း။ (စိုက်ပျိုးမြေ သီးနှံများပါ ပျက်စီးစေပါသည်။)
(၃) မုန်တိုင်း နှင့် ဒီရေမြင့်တက်ချိန်များတွင် ရေလွှမ်းခြင်းကို ပိုမိုခံစားရခြင်း နှင့်
(၄) ကမ်းပြိုခြင်း ဘေးဒုက္ခများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
ဒေသအတွင်း ထိခိုက်မှုအများဆုံး ဖြစ်နိုင်သည့် နိုင်ငံ
အိမ်နီးခြင်း ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် (၅) မီတာ အောက်မှာ ရှိပါတယ်။ လာမယ့် သက္ကရာဇ် (၂၀၅၀) ခုနှစ်မှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဟာ လက်ရှိအမြင့်ထက် (၂) ပေ (၅၀ စင်တီမီတာ) မြင့်တက်လာခဲ့ရင် နိုင်ငံအကျယ်အဝှန်းရဲ့ (၁၁%) ကို ဆုံးရုံှုးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ စီးဆင်းလာတဲ့ ဂင်္ဂါမြစ် နဲ့ ဗြမ္မပုတ္တရမြစ် တို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံအတွင်းမှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး မြေဆီသြဇာ ပြည့်ဝတဲ့ နှုန်းမြေများကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံသားတို့ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် စားသောက်အသက်မွေးရာ ဒေသကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ႓ာကြီး၏ ရာသီဥတု ကမောက်ကမ ဖြစ်ပြီး ပိုမိုပူနွေးလာနေမှု အပြင် မြစ်ကြီးတွေရဲ့ အထက်ပိုင်းမှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဆည်ကြီးတွေကြောင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို ရေအရောက်နည်းလာတာနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာနေခြင်းက စိုက်ပျိုးမြေနေများကို ရေငံတိုးဝင်နေမှုများနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ ယခင်အခါများကတော့ ဆောင်း နဲ့ နွေရာသီလို ရေနည်းချိန်များမှာ လူတွေက စိုက်ပျိုးကြပြီး မိုးတွင်း ရေကြီးချိန်မှာ မြို့ပေါ်တက်ပြီး ရရာအလုပ် လုပ်ကြပါတယ်။ အခုတော့ နှစ်စဉ် လူပေါင်း (၁၀၀,၀၀၀) ခန့် ပင်လယ်နဲ့ နီးရာဒေသများကို မြင့်တက်လာသော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကြောင့် စွန့်ခွာပြီး နဂိုက လူနေထူထပ်လှတဲ့ ဒက္ကားမြို့တော်ဆီကို ရွှေ့ပြောင်း (Migration) နေကြရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုဆိုးလာတာက ကူညီကြတဲ့ နိုင်ငံတစ်ချို့က စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးဖို့ ပေးတဲ့ ရေငံမှာစိုက်တဲ့ မျိုးစပါးတွေဟာ ရေမှာ အငံဓာတ် (၁ %) သာ ရှိမှဖြစ်မှာမို့ ရေငံဓာတ်များပြားလှတဲ့ နေရာတွေမှာ စိုက်မရပျိုးမရ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း ရေငံပုဇွန် ပြောင်းပြီး မွေးမြူဖို့ လုပ်ကိုင်နေကြပြီး အောင်မြင်မှုကောင်းစွာ မရကြသေးလို့ဆိုပါတယ်။
မြေသားတမံနိမ့်များ တည်ဆောက်ပြီး ရေမြင့်တက်လာမှုကို ကာကွယ်ခြင်း မြောင်းငယ်များဖြင့် တက်လာသောရေကို တခြားနေသို့ သွယ်ပို့ခြင်း ကျွန်းငယ်များ တည်ဆောက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ပေးသမျှအကြံများလည်း ကုန်သလောက်ရှိပြီး ထိထိရောက်ရောက် မကာကွယ်နိုင်ကြလို့ ဆိုပါတယ်။
ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ကြပြီးပြီဟု ယူဆရပါသည်။ ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ဆိုလျှင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာနေခြင်း နှင့်အတူ ကျွဲကူးရေပါ မြေပေါ်မြေအောက်ရှိ ရေချိုများအတွင်းသို့ ရေငံများစတင် စိမ့်ဝင်နေလောက်ပါပြီ။ မြောင်းမြက ဆရာဝန်ကြီး၏ သတင်းအရ အချို့ဆင်းရဲသော ရွာနေ ဆင်းရဲသားများမှာ ဆားငံရေဝင်နေသော မသန့်ရှင်းတော့သည့် ရေ (Contaminated water) ကို သုံးစွဲနေရပြီး ကျန်းမာရေး ပိုမိုဆိုးရွားလာနေကြပြီဟု ဆိုပါသည်။
တစ်ချို့ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ရှိသည့် ဒီရေတော (Mangrove) များကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး ပုဇွန်မွေးမြူရေး လုပ်နေကြသည်ဟု သိရသည်မှာ မဖြစ်သင့်သော ကိစ္စများဖြစ်၍ စိတ်မကောင်းပါ။ ဒီရေတောတွေက ကမ်းခြေများ ပြိုကျခြင်းကို ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ကျနော်တို့ ဆီမှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်လာခြင်း နှင့် ထူးကဲဒီရေများကြောင့် ကမ်းပြို မှုများကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် ပြောင်းရွှေ့ပြေးနေရသည်ကို စစ်တောင်းမြစ်ဝတွင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ကြပါပြီ။
သတိတမံ ဉာဏ်မြေကတုတ် လို့ဆိုထားဘဲဗျာ။
Ref: News for Sea Level Rising From internet
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်လာတာနဲ့အတူ တက်နိုင်တဲ့ ထူးကဲဒီရေနဲ့ မုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ မုန်တိုင်းဒီရေ (Storm Surge) အမြင့်တွေ ကို လာမဲ့ လာမဲ့ သက္ကရာဇ် (၂၁၀၀) ထိ ခန့်မှန်းထားတာပါ။ Photo credit to original post.
အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ်က ခန့်မှန်းထားတဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်လာလျှင် ထိခိုက်မဲ့ဒေသတွင်း ကမ်းခြေမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေရသူများကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ (%) တွေကို ပြတာပါ။ Photo credit to original post.
​Source Link: https://www.facebook.com/tin.myint.9/posts/10206392497407179
Waste Water Water Quality Climate Change Drinking Water Integrated Water Resources Management Dams & Bridges Ecosystem Services Urban Development Flooding Groundwater